Fampidirana ampahany amin'ny fitaovana: Toetra ara-teknika sy fanavaozana: SKHZ-B fanaraha-maso isa H-beam fivoriambe machine 1. Ny fomba famokarana welding W-beam dia ny fametrahana ny H-beam araka ny endrika "I", ary manja ny zoro roa amin'ny lafiny roa amin'ny fotoana iray, ka mampitombo ny fahombiazan'ny welding. Noho ny fantsom-pandrefesana simetrika dia tsy miova ny takelaka web aorian'ny fangejana. 2. Ny mekanisma mahitsy H-beam flange straightening machine dire ...
Fampiharana vokatra ho an'ny orinasa Fomban'ny firafitry ny vy: 1. Ny tanjaka ara-pitaovana sy ny lanja maivana: ny vy manana tanjaka avo sy modulus elastika. Raha ampitahaina amin'ny beton sy hazo, dia ambany dia ambany ny tahan'ny hakitroka hahavokarana hery, noho izany ao anatin'ny tarehin-javatra mitovy ihany, kely ny ampahan'ny mpikambana amin'ny firafitra vy, maivana ny lanja maty, mety tsara ny fitaterana sy ny fametrahana azy ary ny firafitry ny vy dia mety amin'ny rafitra misy halavany lehibe, haavo avo ary lava mavesatra ...
Fampidirana Ny fanamafisana ny torolàlana sy ny fanaraha-maso ny sampana mahefa amin'ny drafitra an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra amin'ny fampiasana ny tanim-panjakana sy ny asa fananganana isan-karazany dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny tany sy ny tetik'asa fananganana isan-karazany mifanaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana sy ny fepetra takiana ao amin'ny ny drafitra, ka manome antoka ny amin'ny fanatanterahana ny drafitra ankapobeny an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra, fisehon-javatra mirindra, fiarovana ny tany, fampandrosoana mafy sy maharitra. Plannin ...
Fampidirana Anisan'izany ny fanamboaran-drano (sary amin'ny famatsian-drano sy ny fanamboaran-drano) ary ny fananganana herinaratra (sary fananganana herinaratra fananganana), izay antsoina miaraka amin'ny sary sy rano fananganana herinaratra Ny fananganana famatsian-drano sy ny fanorenan-drano fanodinana rano dia iray amin'ireo singa iray amin'ny tetikasa tokana amin'ny tetikasa injeniera. Io no fototry ny famaritana ny vidin'ny tetikasa sy ny fandaminana ny fanamboarana, ary ilaina ihany koa ...
Fampidirana Ireo singa fototra mamorona ny valiha dia triangular cone, triangular prism, cube, truncated quadrangle, sns. Ireo singa fototra ireo dia azo atambatra ho trigons, quadrilateral, hexagons, faribolana na endrika hafa amin'ny endrika planar. Izy io dia manana tombony amin'ny adin-habakabaka, lanja maivana, henjana lehibe, fampisehoana seismika tsara, sns. Azo ampiasaina ho toy ny tafon'ny gymnasium, sinema, efitrano fampirantiana, efitrano fiandrasana, kodiarana mijoro amin'ny kianja, hangar, valan-tsanganana lehibe roa làlana firafitra sy ...
Fampidirana ny firafitry ny membrane dia fitambaran'ny maritrano sy ny firafitra. Izy io dia karazana firafitra tery izay mampiasa fitaovana manify manelanelana amin'ny hery avo lenta sy rafitra mpanampy mba hiteraka fihenjanana miverimberina ao anatiny amin'ny fomba iray ary mamorona endrika habaka eo ambanin'ny fifehezana ny fihenjanana, izay ampiasaina ho toy ny firakotra manarona na fananganana vatana lehibe ary manana henjana ampy hanoherana ny enta-mavesatra ivelany. Ny firafitry ny membrane dia manaparitaka ny fomba arsitektora tsipika mahitsy ...
Fampidirana Ny rafitra firafitra vy dia rafitra vita amin'ny vy indrindra ary iray amin'ireo karazana tranobe fananganana. Ny rafitra dia manana tanjaka avo, lanja maivana ary henjana avo lenta, noho izany dia mety indrindra amin'ny fananganana tranobe midadasika, avo sy avo be. Ny fitaovana dia manana homogeneity sy isotropy tsara, an'ny vatan'ny elastika tsara, ary mifanaraka indrindra amin'ny eritreritry ny mekanika injeniera ankapobeny. Ny fitaovana dia misy plastika sy henjana tsara, afaka ...
Fampidirana Zavamaniry indostrialy dia manondro ny karazan-trano rehetra ampiasaina mivantana amin'ny famokarana na ny famokarana fanohanana, ao anatin'izany ny atrikasa lehibe, trano fanampiana ary fotodrafitrasa fanampiana. Ny zava-maniry rehetra amin'ny indostria, fitaterana, varotra, fananganana, fikarohana siantifika, sekoly sy ny tarika hafa dia hampidirina ao. Ankoatry ny atrikasa ampiasaina amin'ny famokarana, ny ozinina indostrialy dia misy koa ny tranony manampy. Ny zavamaniry indostrialy dia azo zaraina ho ambina indostrialy rihana ...